ढुवानी असहज हुँदा पूर्वमा औषधि अभाव
न्यूजलय सोमबार ०१, बैशाख २०७७
विराटनगर । ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले ढुवानी गर्न आनाकानी गरेपछि प्रदेश १ मा औषधि अभाव हुन थालेको छ । काठमाडौं र विरगन्जबाट आउने औषधि विराटनगरबाट मात्रै अन्य जिल्लामा ढुवानी हुने भएकाले वितरणमा समस्या हुन थालेको हो ।
पहिला आयात गरिएको औषधी सकिन थालेपछि वितरण गर्न समस्या भएको....
सिमा क्षेत्रमा कडाई गर्न मुख्यमन्त्री राईको निर्देशन
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सिमा क्षेत्रमा कडाई गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार बसेको सुरक्षा परामर्श समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले लकडाउनको बेलामा राहत वितरणमा अत्यन्तै भिडभाड र खुल्ला सिमानाका कारण प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम भएको भन्दै सिमामा कडाई....
प्रदेशमा लक डाउन अझ कडा बनाउने
न्यूजलय शुक्रबार २८, चैत २०७६
मोरङ । प्रदेश १ सरकारले लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले लकडाउन र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धी सुरक्षा योजना बनाउने जिम्मेवारी तोकेको....
सडकमा रहेकालाई सामूहिक आवास गृहमा राख्ने धरान उपमहानगरको निर्णय
धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगर पालिकाको सडकमा रहेको मानिसलाई सामूहिक आवास गृहमा राखिने भएको छ ।
बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पौडेलसहितको बैठकले सडकमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका मानिसहरूलाई धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वनको आवास गृहमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
धरानका सुरक्षाकर्मीहरुले सडकमा बस्दै....
न्यूजलय बिहीबार २७, चैत २०७६
धरान । सुनसरीको धरानमा रहेको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र गिरी नियुक्त भएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको सहकुलपति एवम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले डेढ महिना अघि गरेको सिफारिसको आधारमा कुलपति समेत रहेका डा. गिरीलाई उपकुलपतिमा नियुक्त....
इलाममा क्वरेण्टीनबाट भागेका युवक फेला
इलाम । इलामको क्वरेण्टीनबाट भागेका एक युवक मङ्गलबार भेटिएका छन् । सोमबार राति क्वरेण्टीन वार्डको झ्यालबाट भागेका २२ वर्षीय सरोज अधिकारी इलाम नगरपालिका–९ को सिंहबाहिनी मन्दिरमा भेटिएका हुन् ।
मन्दिरको बाटो हुदैँ गोलाखर्कतर्फ जान लागेको अवस्थामा भेटिएका युवालाई फेरि क्वरेण्टीनमा लगेर राखिएको छ । अधिकारीलाई....
सुनसरीमा ११ जना पाकिस्तानीलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो
न्यूजलय बुधबार २६, चैत २०७६
इटहरी । सुनसरीको दुहवी–१ स्थित जामे मस्जिदमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा ११ जना पाकिस्तानीलाई राखिएको छ ।
गत फाल्गुण २४ गते धर्म प्रचारको लागि काठमाण्डौ हुँदै सुनसरी प्रवेश गरेका उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो ।
लकडाउन सुरु भएको १ दिन अगाडी दुहवीको जामे मस्जीदमा आश्रय लिएर बसेका मो.....
न्यूजलय मङ्गलबार २५, चैत २०७६
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गएमा तीनका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमितको उपचारका क्रममा खटिँदा ज्यान गुमाउने स्वास्थ्यकर्मीसहित कर्मचारीका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय....
कोरोना विरुद्ध राहत संकलनमा सुकुना क्याम्पसको सहभागिता
विराटचोक । मोरङको सुन्दरहरैचा–१२ मा रहेको सुकुना बहुमुखी क्याम्पसले राहत संकलनमा सहभागिता जनाएको छ ।
मंगलबार क्याम्पसले प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको तर्फबाट एक दिनको तलब बराबर हुन आउने रकम रु. १ लाख २ हजार १७४ रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा हुने गरि हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रदेश १ को कोरोना कोषमा ११ करोड ६५ लाख संकलन
न्यूजलय सोमबार २४, चैत २०७६
विराटनगर । प्रदेश १ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा हालसम्म कूल ११ करोड ६५ लाख ११ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।
कोषमा आज (सोमबार) थप ५ लाख ९२ हजार ७ सय ४२ रुपैयाँ जम्मा भएको हो । कोषमा आइतबारसम्म ११ करोड ५९....
कोरोना जितेर घर फर्किए ४३ जना सङ्क्रमित
२०७७ जेठ १३ गते मंगलबारको राशिफल
रेमिट्यान्स पठाउन सजिलो बनाइँदै
हात्तीलाई टुनामुना गर्न खोज्दा ज्यान गयो ...